Ciidamo Itoobiyaan ah oo u boqoolay Magaalafa Baydhabo ee Fadhiga Baarlamaanka Somaliya | maakhir.com
Ciidamo Itoobiyaan ah oo u boqoolay Magaalafa Baydhabo ee Fadhiga Baarlamaanka Somaliya
Muqdisho:- Wararka naga soo gaadhaya magaalada Caasimada ee ah Muqdisho ayaa waxay sheegayaan inay maanta ay halkaasi ka boqooleen ilaa 50- Gaadhi oo nooca loo yaqaan Uralka ah kuwaas oo ay wateen ciidamada Itoobiya,dad aad ugu dhuun dalooda ayaa sheegay inay ciidamadaasi u kaceen dhank Magaalada Baydhabo ee Xarunta Baarlamaanka Somaliya.
Dadka ku nool deegaanada Wanlaweeyn iyo leego ee gobolka Sh/hoose ayaa waxaa ay sheegeen in ay arkayeen Ciidamo Ethiopian ah oo aad u fara badan saarana gawaarida uralka ah kuwsaasi oo ku sii jeeday Magaalada Baydhabo ee Xarunta Gobolka Baay, dadkaasi waxay kaloo sheegeen inay ciidamadaasi aanay istaagin wadooyinkan iyaga oo si toosa uga gudbayay deegaankasta.
Ciidamadan ayaa badoonku ka soo boqoolay magaalada Muqdisho ee Caasimada Somaliya halkaasi oo ay mudooyinkan ku sugnaayeen waxana la soo sheegay inay ciidamadani yihiin guutadii joogtay warshadii baastada ee Hore.
Lama saadinlin karo ujeedka ay ciidamaasi uga baxeen caasimada Somaliya ee Muqdisho taasi oo xaalkeedu haatan cakiran yahay,walaw ay jiraan warar sheegay inay ciidamadaasi xoojin doonaan cutub kale oo ciidamada Itoobiya ah kuwaasi oo ku sugan gudaha Magaalada Baydhabo, waxana warku uu intaasi ku darayaa in looga gol leeyaha Amaankii Baydhabo oo faraha ka baxay ka dib markii tira ka dhawor jeer la toogtay ciidamada Itoobiya ee halkaasi jooga.
Saraakiisha Ciidamada Itoobiya ee jooga Muqdisho ayaanu isku daynay inaanu xog dheeraad ah ka helo bal siday noogu faah faahin la hayeen ka bixtaanka Ciidamaasi balse way noo suuribi waday.
Dhanka kale dhamaan Bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa aad u soo dhaweeyay ka bixitaanka Ciidamada Itoobiya kuwaasi oo sheegay inay culus wayn ku hayeen bulshada ku dhaqan Magaalada Muqdisho.
« Gudoomiyaha Gobolka Hiiraan oo ka hadlay Dagaaladii ka dhacay Balad-wayne
Xaflad xilka lagu kala wareegayay ayaa ka dhacday Jaamacada Bariga Afrika ee Magaalada Bosaaso »